कुन कोरोना खोप सफल हुने बढी सम्भावना छ र कहिले आउँछ ?
जनतापाटी बिहिवार, मंसिर ४, २०७७, १०:२९:०० मा प्रकाशित
एजेन्सी । पछिल्लो दुई हप्तामा अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मन कम्पनी बायोनोटेकले साझामा र मोडर्नाले कोभिड खोपको अत्याधिक सफल परीक्षण गरिएको घोषणा गरेका छन्।
अन्य खोपहरूमा काम भइरहेको छ, जबकी तेस्रो महत्त्वपूर्ण परीक्षण बेल्जियमको कम्पनी जोनसेनले गरिरहेको छ र बेलायतमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
किन खोप चाहियो ?
यदि तपाईं आफ्नो जीवन सामान्यमा फर्कन चाहनुहुन्छ भने, तब हामीलाई खोप चाहिन्छ।
अहिले पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा छन्। अहिलेको लागि हामी हाम्रो जीवन स्थितिको संयमित गरेर मात्र बढी मानिसहरूलाई मृत्युबाट बचाइरहेका छौं।
तर खोपले हाम्रो शरीरलाई सुरक्षित रूपमा लड्न सिकाउँछ। यसले या त हामीलाई पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बचाउँछ वा कमसेकम कोभिड १९ लाई प्राणघातक हुन दिँदैन ।
भ्याक्सिनको साथ उत्तम उपचार भनेको 'कोरोना भाइरस महामारीबाट बाहिर निस्कने रणनीति' हो।
कुन खोप सफल हुने बढी सम्भावना छ ?
फाइजर र बायोनटेक औषधी कम्पनी हो, जसले कोभिड खोपको बारेमा अन्तिम परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएका छन् । यी दुई कम्पनीले साझेदारीमा खोप बनाइरहेका छन् ।
कम्पनीकाअनुसार बनाइरहेको खोपले कोभिड १९ को महामारीबाट ९० प्रतिशत मानिसहरूलाई बचाउन सक्छ। ती मानिसहरुमा प्रभावकारी असर पुगेको देखिन्छ ।
यो खोप लगभग ४३००० व्यक्तिमा परीक्षण गरिएको छ । परिक्षणमा पछि ती व्यक्तिहरुमा खासै कुनै समस्या नआएको बताइएको छ ।
खोप बनाइरहेको अर्को कम्पनी हो, मोडर्ना । यो कम्पनीले अमेरिकामा ३०००० मानिसहरुमा खोप परीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये आधालाई डमी ईजेक्सन दिइएको थियो ।
तसर्थ, यो खोप ९४.५ प्रतिशत सुरक्षित रहेको बताइएको छ ।
यस्तै, बेलायती औषधि कम्पनी एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले पनि खोप विकास गरिरहेका छन्। यसको परीक्षणको नतीजाहरु केहि हप्तामा आउँनेछ।
यस बीचमा, स्पुतनिक भि नामक एक डेटा जारी गरिएको छ, जुन प्रोत्साहनजनक छ।
के अन्य खोपहरू विकास भइरहेको छ ?
आउने हप्ताहरुमा खोप निर्माण गरिरहेका अन्य कम्पनीले खोपबारे परिणाम सार्वजनिक गर्ने आंकलन गरिएको छ ।
जोनसेनको परीक्षणमा बेलायतबाट ६ हजार मानिसहरूलाई सामेल गर्ने काम सुरु भएको छ। अन्य देशहरू पनि यस प्रयासमा सामेल हुनेछन् र यो संख्या ३० हजार पुर्याउने कम्पनीको योजना छ ।
कम्पनीले यस खोपको ठूलो मात्रामा परीक्षण गरिसकेको छ, जसमा स्वयम्सेवकहरूलाई डोज दिइएको थियो। अब कम्पनीले एक मजबूत र दिगो दिगो प्रतिरक्षासहितको खोप दिने तयारीमा छ ।
धेरै अन्य खोप परीक्षणहरू पनि अन्तिम चरणमा छन्। जसमा वुहान इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट, चीनको साइनोफर्मा, रुसको मस्कोस्थित गेमालेया रिसर्च इस्टिच्युट अफ एपिडेमिलोजी एण्ड माइक्रोबायोलोजी छन् ।
यद्यपी, ब्राजिलमा विकसित भैरहेको चिनियाँ कम्पनी साइनोवाकको खोप भने गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै रोक लगाइएको थियो । जसमा एक स्वयंसेवकको मृत्यु भएको थियो।
खोपहरू कसरी विकसित हुँदैछ ?
खोपको उद्देश्य हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई हानी नगरी कोरोना भाइरसको केही भागहरूमा संक्रमित गर्नु हो। यससँग हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीले आक्रमण गर्ने भाइरस पहिचान गरेर लड्न सिक्छ ।
फाइजर/बायोनोटेक र मोडर्नाले विकसित गरेको छ आरएनए खोपको रूपमा चिनिन्छ। यसले प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाउँछ, जहाँ भाइरसको आनुवंशिक कोड मानव शरीरमा पठाइन्छ र यसमार्फत प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रशिक्षण दिइन्छ । ताकी भाइरसलाई नष्ट गर्न सकोस् ।
जोनसेनको खोपले साधारण चिसो भाइरसको प्रयोग गरिरहेको छ जसमा आनुवंशिक परिवर्तन गरिएको छ ताकि यसले मानव शरीरलाई हानी नगरोस् र आणविक तहमा ती कोरोनाभाइरस जस्तै छन्। यो कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन र लड्न प्रतिरक्षा प्रणालीको प्रशिक्षण दिन्छ ।
त्यस्तै, अक्सफोर्ड र रसियाका खोपहरूले पनि चिम्पान्जीलाई संक्रमित गर्ने गैर-हानिकारक भाइरसहरू लिएका छन् र कोरोना भाइरसको समान हुन आनुवंशिक रूपले परिमार्जन गरिएको छ, ताकि शरीरले यसको प्रतिक्रिया देख्न कोशिस गरोस् ।
चीनमा बनेका दुई खोपले वास्तविक भाइरस प्रयोग गरिरहेको छ तर यसको प्रयोग दुर्लभ बिरामीमा गरिएको छ, त्यसैले यसले कोरोना भाइरस संक्रमण हुन सक्दैन।
खोप कति दिन लाग्छ ?
फाइजरले यस वर्षको अन्त्यमा ५ करोड खोप र २०२१ को अन्त्यसम्म करिब १३० करोड डोज उत्पादन गर्न सक्षम रहेको बताएको छ ।
एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड र बेलायतबीच १० करोड डोज उपलब्ध गराउने सहमती भैसकेको छ । यदि खोप पूर्णरुपमा सफल साबित भयो भने विश्वव्यापी रूपमा २० करोड डोज उत्पादन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
ब्रिटेनले मोडर्नासँग पनि खोपको बारेमा कुरा गरिरहेको बताइएको छ ।
कसले पहिले खोप लिन्छ ?
खोप बनिसकेपछि कसलाई पहिला दिइन्छ भन्ने अर्को चासोको विषय रह्यो । यो खोप जुन समूहमा सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ तिनीहरुलाई उपलब्ध गराइने आंकलन गरिएको छ ।
बेलायतमा भने वृद्ध वृद्धा र घरमा हेरचाह गर्ने कर्मचारीहरू पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसपछि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अब के आवश्यक छ ?
-क्लिनिकल परीक्षणहरूमा विकसित खोपहरुले मानिसहरुलाई बिरामी हुनबाट मानिसहरूलाई बचाइरहेको छ वा कमसेकम मरेको संख्या घटाइरहेको देख्न सकिन्छ।
-अर्बौँको संख्या बनाउन यो ठूलो स्तरमा विकास गर्नुपर्नेछ।
-व्यक्तिलाई दिनुअघि औषधि नियामकहरूले यसलाई अनुमोदन गर्न अनिवार्य छ।
-यो विश्वास गरिन्छ कि यदि खोप राम्रोसँग काम गर्दछ र विश्वको अर्बौ जनसंख्या खोप लगाईयो भने यो संक्रमणलाई बढ्नबाट रोक्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
के सबैजना खोपबाट सुरक्षित हुनेछन् ?
खोपबारे व्यक्ति पिछे फरकफरक मत रहेको छ । समग्रमा यो खोपले अन्य वर्गलाई सुरक्षित राखे पनि बुढापाकालाई कम सुरक्षित राख्ने अनुमान गरिएको छ । तिनीहरूको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएको कारण कम प्रभावकारी हुने बताइएको छ । बीबीसी
आईपीएलमा बिराट कोहलीको टिमको ७ औं हार मंगलवार, बैशाख ३, २०७६, ०६:४६:००
हँसिलो मुद्रामा ट्रम्प–किमको हस्तमिलान, ट्रम्पले भने, ‘यो विश्वका लागि ठूलो दिन (भिडियोसहित) आइतवार, असार १५, २०७६, १५:१६:००
सरकारको एक वर्ष अन्यौलतामा सीमित : ठोस काम हुन सकेन प्रधानमन्त्री वा सरकारको राजनीतिक एउटा भिजन, त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने मार्गचित्र र त्यसमा बाधक तथा नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनको सूची भएको भए धेरै कानुन खुद्रामा होइन, थोकमा बन्न सक्थ्यो कि ? जहाँसम्म संघीयता कार्यान्वयनको प्रश्न छ, यसमा ओली सरकारको नियतमै पो समस्या छ कि ? वा नयाँ प्रणालीमा जाने क्रममा नियतिमा मात्रै समस्या देखिएको हो ? मंगलवार, माघ २९, २०७५, १२:३८:००
यस्तो छ, तपाईको आजको राशिफल